बेनी नगरपालिकाको असी प्रतिशत बिकास बजेट खर्च – धौलागिरी खबर
बेनी नगरपालिकाको असी प्रतिशत बिकास बजेट खर्च
धौलागिरी खबर	 २०७८ श्रावण १४, बिहीबार १९:२५ गते मा प्रकाशित 392 0
चार सय योजना कार्यान्वयन
बेनी, । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले हालै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा करिब चार सय वटा योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
४०९ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन भएकोमा ३९८ वटा कार्यान्वयन भएका नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छबीलाल सुबेदीले ३७६ वटा योजना उपभोक्ता समिति र २२ वटा ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
पुर्बाधार तर्फ ३०२ वटा योजना थिए । स्थानीय पुर्बाधार साझेदारी कार्यक्रमका ७, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका ११, शिक्षातर्फ प्रदेश सरकारका २, शिक्षा समितिका १६ वटा, सडक बोर्डको एक वटा, प्रदेशका चार, संघीयका ४ र कार्यपालिकाबाट स्विकृत भएका १४ वटा योजना थिए ।
सडकको नयाँ मार्ग खोल्ने, पहिले निर्माण भएका सडक स्तरोन्नति, नदी तथा पहिरो नियन्त्रण, पर्यटकीय स्थलमा पुर्बाधार निर्माण, भवन, खानेपानी, सिचाई लगायतका आयोजना सञ्चालन गरेको थियो ।
बेनीमा नगरपालिकाको प्रशासकीय र ७ नम्बर वडाको भवन, क्याम्पसचोकमा बाढी ब्यवस्थापन, अर्थुङ्गेमा सडक कालोपत्रे, ६ नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माण भएको छ । गलेश्वर–काउलेगौडा–पात्लेखेत, हाँडेभिर–लभ्लिहिल, दुधेखोला–हल्लेगौडा सडक नगरपालिकाले गत वर्ष महत्व र प्राथमिकता दिएका योजना हुन् ।
भकिम्लीको चिनाखेत र ज्यामरुककोटको स्यानालेकमा खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बेनी नगरपालिकाले पुँजिगत तर्फ ८०.८ र चालुतर्फ ८३.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
बिकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बिनियोजन भएको रु. ४५ करोड ९३ लाख आठ हजार मध्य रु. ३८ करोड २५ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ । शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता, जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा, प्रशासनिक कार्यका लागि चालु शिर्षकमा रु. १९ करोड १० लाख २४ हजार बिनियोजन भएकोमा रु. १५ करोड २९ लाख ८२ हजार खर्च भएको छ ।
पुजिगततर्फको रु. तीन करोड ८० लाख ४१ हजार र चालु शिर्षको रु. सात करोड ६७ लाख ९ हजार बजेट खर्च हुन सकेन् । पुजिगत शिर्षकको खर्च हुन नसकेको बजेटलाई योजना तथा कार्यक्रमका लागि बिनियोजन गर्न सकिन्छ । चालु शिर्षकको बजेट सरकारको कोषमा फिर्ता गर्नुपर्छ ।